July 20, 2021 N88LeaveaComment on भाेलि सार्वजनिक बिदा
काठमाडाैं । इस्लाम धर्मावलम्बीहरुको चाड बक्र इद (ईद–उल–अजहा)को अवसरमा सरकारले भोलि सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रावण ६ गते बुधबार देशभरका सरकारी कार्यालय र निकाय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको हो। बकर इद रमजान (इदुलफित्र) पछि इस्लामहरुको दोस्रो ठूलो चाड हो । याे पनि समाचार बलि (कुर्वान) […]
कांग्रेसमा मन्त्री बन्न दौडधुप, को–को छन् आकांक्षी ? छायाँ मन्त्री छायाँमै !
July 20, 2021 N88LeaveaComment on कांग्रेसमा मन्त्री बन्न दौडधुप, को–को छन् आकांक्षी ? छायाँ मन्त्री छायाँमै !
काठमाडौं । पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने मानसिकतासहित प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेको नेपाली कांग्रेस चार वर्ष नपुग्दै सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो । संसदको अंकगणितमा एक चौथाइ पनि मत नपाएको कांग्रेसलाई साबिकको नेकपा हुँदै हालको नेकपा एमालेको अन्तरकलहले सत्तामा पर्‍याएको छ । सर्वाेच्च अदालतको २८ असारको फैसलाअनुसार संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि १४९ सांसदको हस्ताक्षर जुटाएका कांग्रेस सभापति […]
कक्षा १२ को परीक्षा साउन ३१ गतेबाट, कुन दिन कुन विषयको परीक्षा, यस्तो छ समयतालिका
July 20, 2021 N88LeaveaComment on कक्षा १२ को परीक्षा साउन ३१ गतेबाट, कुन दिन कुन विषयको परीक्षा, यस्तो छ समयतालिका
काठमाडाैं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को अन्तिम वार्षिक परीक्षा लिने तयारी गरेको छ । बोर्डको निर्णय अनुसार साउन ३१ गते बिहीबारदेखि परीक्षा सुरु हुनेछ । भदौ ९ गतेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षामा विद्यार्थीहरूले होम सेन्टर (आफ्नै विद्यालय)बाट परीक्षा दिन पाउने छन् । भौतिक दूरी कायम राख्दै स्वास्थ्य सुरक्षाको उपाय अपनाउँदै परीक्षा लिने व्यवस्था मिलाउन […]
मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलकाे उल्टाेगन्ती शुरू, प्रचण्ड र देउवाबीच भयो यस्तो सहमति, नयाँ मुख्यमन्त्री काे ?
July 20, 2021 July 20, 2021 N88LeaveaComment on मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलकाे उल्टाेगन्ती शुरू, प्रचण्ड र देउवाबीच भयो यस्तो सहमति, नयाँ मुख्यमन्त्री काे ?
काठमाडाैं । केन्द्रमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सत्ता विस्थापित गरेसँगै नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनले लुम्बिनी प्रदेश सरकार विस्थापित गर्न रणनीति तयार पारिरहेको छ । लामो समयदेखि अल्पमतका बाबजुद सत्तामा रहेका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले विभिन्न बहानामा सत्ता लम्ब्याउँदै आएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले उनलाई विस्थापित गर्न खोजेको हो । विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा […]
प्रचण्डले बुहारी बीना मगरलाई सुम्पिदैछन् पार्टीकाे यति ठूलाे जिम्मेवारी !
July 20, 2021 N88LeaveaComment on प्रचण्डले बुहारी बीना मगरलाई सुम्पिदैछन् पार्टीकाे यति ठूलाे जिम्मेवारी !
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बुहारी विना मगरलाई पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष बनाउने तयारी थालेको खबर छ । बुहारी विनालाई पार्टीको प्रदेश अध्यक्ष बनाउन प्रचण्डले सुदूरपश्चिमका माओवादी नेताहरुसंग छलफल थालेको एक नेताले बताए । सर्वोच्च अदालतको २३ फागुन २०७७ को फैसललाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग भएपछि सुदूरपश्चिममा नेकपा माओवादी केन्द्र […]
वास्तु मिलेको घरमा बस्दा सुख, सौभाग्य र आयु आरोग्यमा वृद्धि हुन्छ : ज्योतिर्विद् सुवेदी
July 20, 2021 N88LeaveaComment on वास्तु मिलेको घरमा बस्दा सुख, सौभाग्य र आयु आरोग्यमा वृद्धि हुन्छ : ज्योतिर्विद् सुवेदी
ज्योतिर्विद् संजय सुवेदी वास्तु शब्द संस्कृतको मुल शब्द ‘वास’ बाट आएको हो । वास्तु शब्दले निवासलाई बुझाउँछ । सबै किसिमका प्राणीका लागि आवासको छुट्टै महत्व हुन्छ र सबै प्राणीका आ–आफ्नै प्रकारका आवास हुने गर्छन् । किरा फट्याङ्ग्राका आफ्नै किसिमको आवास हुन्छ । स्याल, फ्याउरो, ब्वाँसो आदिजनावरहरु जंगलकागुफा र ओढारमा बस्छन । हात्ती , गैडा र […]
July 20, 2021 N88LeaveaComment on के हो अंशबण्डा ? बाबुआमाले छोराछोरीलाई अंश दिन्न भन्न पाउँछन् ?
नवीन धिताल सगोलमा रहेको पारिवारिक सम्पत्तिलाई अंशियारहरूबीच भागवण्डा लगाउने प्रक्रियालाई कानुनी भाषामा अंशबण्डा भनेर बुझिन्छ । सामान्यतया पितापुर्खा, बाबुबाजेबाट हक हस्तान्तरण हुँदै आएको सम्पत्ति र एकाघर परिवारका सदस्यहरूको एकल तथा संयुक्त प्रयासबाट आर्जन गरेको वा बढे/बढाएको सम्पत्ति अंशियारबीच अंशबण्डा गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी मान्यता छ । अंशबण्डा जीवित भएका व्यक्तिबीच गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था साविक मुलुकी ऐनले […]
घरबहाल करः कहाँ, कसले र कति तिर्ने ? यी हुन् तपाईंले जान्नुपर्ने कुराहरु
July 20, 2021 N88LeaveaComment on घरबहाल करः कहाँ, कसले र कति तिर्ने ? यी हुन् तपाईंले जान्नुपर्ने कुराहरु
काठमाडौं । घरबहाल कर पछिल्ला दिनमा धेरैलाई टाउको दुखाईको बिषय बन्ने गरेको छ । मुलुक तीन तहको संरचनामा गएसँगै स्थानीय सरकारले घर बहाल करलाई आफ्नो आम्दानीको मुख्य स्रोतका रुपमा लिन थालेपछि घरबहाल कर असुली तिब्र भएको छ । लामो समयसम्म घर बहाललाई आम्दानीका रुपमा मान्यता दिने र त्यसमा कर लगाउने कानुनी प्रबन्धहरु फिलतो थिए । […]
July 20, 2021 N88LeaveaComment on कक्षा १२ को परीक्षा भौतिक उपस्थितिमै हुने
काठमाडौँ । अब कक्षा १२ को परीक्षा भौतिक उपस्थितिमै हुने भउको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा भौतिक उपस्थितिमै गराउन तयारी सुरु गरेको छ । कोभिड १९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले भौतिक दुरी कायम गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर परीक्षा सञ्चालन अनुमति दिएपछि भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा गर्न लागिएको हो । अब मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि परीक्षा […]
लामो कपाल हेर्न हजारौंको भीड, यस्तो छ रहस्य
July 20, 2021 N88LeaveaComment on लामो कपाल हेर्न हजारौंको भीड, यस्तो छ रहस्य
काठमाडौं । दुनियाँकै लामो कपाल भएका महिलाहरुलाई हेर्न हजारौँको भीड लाग्ने गरेका छ । एकजना होइन दुइजना होइन, गाउँ भरीका महिलाको लामो कपाल हेर्न भीड लाग्ने गरेको हो । हरेक वर्ष झण्डै ८० हजार मानिस त्यहि लामो कपाल हेर्नकै लागि आउने गरेका छन् । कपाल हेर्न हजारौंको भीड लाग्ने गरेपछि पुरै गाउँका महिलाले लामो कपाल […]